Semalt: Iintlobo ezahlukeneyo zeTrojans kunye nempembelelo yazo
uFrank Abagnale, Semalt uMphathi weNtengo yabaPhicothi, uthe iTrojan yenziwe ngokuthathela ulwazi lwebhanki kubasebenzisi be-intanethi. Ezi zibhanqa zisasazeka nge-imeyile, ii-keyloggers kunye ne-ads-pop-up. Isebenzisa izigidi ze-computer ze-zombie ukwenzela ukuqhubela i-keystroke logging, kunye nokuhlaselwa kwe-akhawunti yebhanki kunye nokweba idatha yangasese. I-Trojans iqokelela ulwazi, kwaye i-FBI ibhengeze ukuba ifumene i-cybercriminal eyayisebenzisa uZeus ngokuthatha ngaphezulu kwezigidi ezingama-20 ezivela kwiibhanki zaseCanada.
Iintlobo ezahlukeneyo zeTrojans:
I-Trojans ingabalwa kwiindidi ezahlukeneyo ngokusetyenzisweni kwazo kunye neentlobo zokuhlaselwa.
1 - best grain storage bins. Backdoor
I-Trojan yangasese yangaphandle inika abahlaseli ithuba lokulawula isixhobo sakho kunye nokunciphisa inani elikhulu leekhomputha. Yenza lula ukuba umdali wayo enze imisebenzi eyahlukeneyo ayithandayo, kuquka ukuthumela, ukuqaliswa, ukususa nokufumana iifayile, ukubuyisela kwakhona iikhomputha kunye nokubonisa idatha. AmaTrojans angaphandle angasetyenziswa ngokubanzi ekudibaniseni amaqela eikhomputha ze-victim kunye nefom zombie okanye amanethiwekhi e-botnet.
Ukuxhatshazwa yiTrojan equlethe iinkcukacha ezinobungozi kunye neefowuni kwaye ithatha inzuzo yobuthathaka ngaphakathi kwikhompyutheni yakho okanye kwiselula.
Ii-Rootkits zenzelwe ukufihla izinto ezithile kunye nemisebenzi kumatshini wakho. Injongo yabo ephambili kukusasaza izinto ezinobungozi kwiwebhu ehlabathini lonke kwaye bandise ixesha ngexesha iiprogram zakho zilayisha kakuhle.
Luhlobo oluthile lweTrojan oluye lunceda abanonobumba beba idatha ye-akhawunti yabasebenzisi abahlukeneyo. Abagculi basebenzise le nkcazelo ngokuba imali kwiibhanki ze-intanethi, amakhadi enkredithi kunye ne-debit kunye ne-intlawulo iinkqubo.
iTrojan-DDoS inoxanduva lokuqhuba yonke i-DoS (ukulahlwa kweNkonzo) ukuhlaselwa kwiidilesi zewebhu ezijoliswe kuyo. Ithumela izicelo ezininzi kubasebenzisi kwaye ichaphazela inani elikhulu leekhompyutha.
Kufuneka uqaphele rhoqo ukusebenza kunye nemisebenzi yenkqubo yakho ukwenzela ukuba ukuziphatha okungaqhelekanga kungagqitywa. Zonke izixhobo zakho kunye nesofthiwe kufuneka zihlaziyeke ngokukodwa ukhuseleko lwakho.
Abasebenzisi kufuneka baqeqeshwe ukuba bayeke kwimisebenzi ebabeka kwimingcipheko yokukhuselwa yi-bot kunye nokuhlaselwa kwe-malware.
8. ISMS iTrojan
I-SMS yeTrojan iya kuhlawula imali kwaye ithumele imiyalezo evela kumbolo yakho yeselula ukuya kwi-premium rate yeenombolo zefowuni imihla ngemihla.
iTrojan spy yiinkqubo ezifakwe kwiifayile zakho ngokuzenzekelayo kwaye zikhohlise amagama akho angundoqo, thatha ama-skrini uze ufumane uluhlu lwazo zonke izicelo zakho zokusebenza.
Kunconywe i-antivirus, i-Trojan-anti-Trojan, kunye ne-anti-malware